Hlola eLondon, eNgilandi - World Tourism Portal
Hlola eLondon, eNgilandi
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eLondon
Bukela ividiyo ekhuluma ngeLondon
Hlola iLondon idolobha elikhulu nedolobha elikhulu kunawo womabili England kanye ne-United Kingdom, kanye nedolobha elikhulu kunawo wonke phakathi kwe-European Union. Ukuma emfuleni iThames eningizimu-mpumalanga yeNgilandi, esiqongweni sesifunda saso esingama-80 km esiholela enyakatho yolwandle, iLondon kube yindawo enkulu yokuhlala iminyaka eyizinkulungwane ezimbili.
ILondinium yasungulwa ngabaseRoma. Idolobha laseLondon, umnyombo wasendulo waseLondon - indawo eyi-2.9 km nje2 futhi yaziwa njenge-Square Mile - igcina imingcele elandela eduze imikhawulo yayo yangezikhathi. Idolobha laseWestminster libuye libe yi-Inner London Borough ebambe isimo sedolobha.
IGreater London ilawulwa yiMeya yaseLondon kanye neLondon Assembly.
Hlola iLondon, idolobha elithathwa njengelinye lamadolobha omhlaba abaluleke kunawo wonke emhlabeni futhi elibizwa ngokuthi lamadolobha anamandla kunawo wonke emhlabeni, onamandla kakhulu, ofiseleka kakhulu, onamandla kakhulu, ovakashelwe kakhulu, obiza kakhulu, osungula izinto, ozinzile, otshala imali kakhulu, odume kakhulu kuwo sebenza, nedolobha elinobungane kakhulu emhlabeni. ILondon inethonya elikhulu kwezobuciko, kwezentengiselwano, kwezemfundo, kwezokuzijabulisa, kwezemfashini, kwezezimali, kwezempilo, kwabezindaba, izinsizakusebenza ezobuchwepheshe, ucwaningo nentuthuko, ezokuvakasha nezokuhamba. ILondon ifaka i-26 emadolobheni amakhulu i-300 emadolobheni amakhulu okusebenza kuwo kwezomnotho. Lesi ngesinye sezikhungo ezinkulu kakhulu zezezimali futhi sinendawo enkulu yesihlanu noma yesithupha yendawo enkulu yedolobha. Ungumuzi ovakasheleke kakhulu njengoba ulinganiswa abafika kwamanye amazwe futhi unesistimu sezindiza esikhulu kunazo zonke esilinganisweni sezimoto. Indawo ehamba phambili yokutshala imali,
ukusingatha abathengisi bamazwe omhlaba kanye nabantu ababiza kakhulu nge-Ultra ephezulu kunanoma iliphi elinye idolobha. Amanyuvesi aseLondon akha inqwaba yezikhungo zemfundo ephakeme eYurophu. E-2012, iLondon yaba lidolobha lokuqala ukuba nemidlalo emithathu yanamuhla yama-Olimpiki ehlobo.
ILondon inabantu abahlukahlukene kanye namasiko, futhi kukhulunywa izilimi ezingaphezu kwe-300 esifundeni. Isilinganiso sabantu abomasipala abaphakathi kwe-2016 (elihambelana neGreater London) bekuyi-8,787,892, eyayinabantu abaningi kunawo wonke amadolobha e-European Union futhi ibalwa nge-13.4% yabantu base-UK. Indawo yasemadolobheni yaseLondon ingeyesibili enabantu abaningi e-EU, ngemuva kweParis.
ILondon iqukethe izindawo ezine zamagugu omhlaba: uMbhoshongo waseLondon; Izingadi zaseKew; indawo equkethe iSigodlo saseWestminster, iWestminster Abbey, neSonto likaSt Margaret; kanye nokuhlala komlando eGreenwich lapho iRoyal Observatory, iGreenwich ichaza khona i-Prime Meridian, i-0 ° ubude, kanye ne-Greenwich Mean Time. Ezinye izindawo eziveziwe zibandakanya iBuckingham Palace, iLondon eyeLondon, iPiccadilly Circus, iSt Paul Cathedral, iTower Bridge, iTrefalgar Square kanye neShard. ILondon ineminyuziyamu eminingi, imidwebo, imitapo yolwazi nemicimbi yezemidlalo. ILondon Underground iyinethiwekhi yesitimela endala kakhulu engaphansi komhlaba emhlabeni.
I-London Natural History Society iphakamisa ukuthi iLondon "ingenye yamazwe aluhlaza okwesibhakabhaka emhlabeni" enendawo engaphezulu kwephesenti ye-40 noma amanzi avulekile. ILondon inamaSayithi we-38 weSpecial Science Science (SSSIs), amaNationalvelo Reservation kanye ne-76 Local Nature Reservation.
Imboni yezimali yaseLondon isekelwe eDolobheni laseLondon naseCanary Wharf, izifunda ezimbili ezinkulu zebhizinisi eLondon. ILondon ingesinye sezikhungo ezivelele zezimali zomhlaba njengendawo ebaluleke kunazo zonke yezimali zomhlaba. ILondon yathatha izintambo njengesikhungo esikhulu sezimali kungekudala kwe1795 lapho iRiphabhlikhi yaseDutch yawa ngaphambi kwamasosha kaNapoleonic. Amabhange amaningi asungulwe ngaphakathi Amsterdam ngalesi sikhathi bathuthela eLondon. Iqembu lezimali laseLondon laqiniswa umphakathi onamandla wamaJuda aqhamuka kulo lonke elaseYurophu okwazi ukusebenzisa amathuluzi wezezimali ayeyisimangaliso ngaleso sikhathi. Lokhu kuhlanganiswa kwamathalente okujubane kukhuphule uguquko kusuka kuCommerce Revolution kuya kwi-Industrial Revolution. Ekupheleni kwekhulu le-19th, iBrithani yayiyisigwili kunazo zonke izizwe, neLondon yisikhungo sezimali esiholayo.
ILondon ingesinye sezindawo ezihola phambili izivakashi emhlabeni futhi e2015 ibalwe njengedolobha elivakashelwa kakhulu emhlabeni ngokuvakasha okungaphezu kwezigidi ze-65. Futhi idolobha eliphakeme kakhulu emhlabeni ngokusetshenziswa kwemali yomngcele wezivakashi. Njengoba kwe-2016 ILondon yindawo ephezulu yedolobha elihamba phambili njengoba kubalwa abasebenzisi be-TripAdvisor.
ILondon iyikhaya leminyuziyamu eminingi, imidwebo nakwezinye izikhungo, eziningi zazo ezingenamacala okuvuma futhi ziyizindawo eziheha izivakashi futhi zidlala indima yocwaningo. Esokuqala salokhu ukusungulwa kwakuyiBritish Museum eBloomsbury, e1753. Imvelaphi equkethe izinto zakudala, isampula yomlando wemvelo, nomtapo wolwazi kazwelonke, imnyuziyamu manje inezingcweti eziyizigidi ezingama-7 ezivela emhlabeni jikelele. E-1824, igalari Yesizwe yasungulwa ukuba iqoqe iqoqo lesizwe laseBrithani lokupenda kwaseNtshonalanga; lokhu manje kusesikhundleni esivelele eTrafalgar Square.
E-2015 izinto ezivakashelwa kakhulu e-UK ezivakashelwe kakhulu e-UK zonke zaziseLondon.
Izikhangisi eziphezulu ezivakashelwe kakhulu i-10 yilezi: (ngokuvakasha endaweni ngayinye)
Imnyuziyamu yaseBrithani: 6,820,686
Igalari Yesizwe: 5,908,254
Imnyuziyamu yezeNdalo (South Kensington): 5,284,023
Isikhungo seSouthbank: 5,102,883
I-Tate Modern: 4,712,581
IMnyuziyamu iVictoria ne-Albert Museum (South Kensington): 3,432,325
Imnyuziyamu weSayensi: 3,356,212
ISomerset House: 3,235,104
UMbhoshongo waseLondon: 2,785,249
Igalari Yezwe Yesizwe Yobuso: 2,145,486
Isibalo samakamelo amahhotela eLondon e2015 sime e138,769, futhi kulindeleke ukuthi sikhule ngokuhamba kweminyaka.
ILondon yisikhungo esikhulu somhlaba wonke semfundo ephakeme yokufundisa nokucwaninga futhi inenqwaba yezikhungo zemfundo ephakeme eYurophu.
Izikhungo eziningi zemfundo ezihola phambili emhlabeni zakhiwe eLondon.
Ezokungcebeleka ziyingxenye enkulu yomnotho waseLondon, ngombiko we-2003 obonisa ikota yawo wonke umnotho wezokungcebeleka wase-UK eLondon emicimbini ye-25.6 kubantu be-1000. Emhlabeni jikelele, leli dolobha liphakathi kwezindawo ezinkulu ezine zemfashini zomhlaba, futhi ngokwezibalo ezisemthethweni, iLondon yisikhungo sesithathu sokukhiqiza amafilimu emhlabeni, sinikeza amahlaya abukhoma kunanoma iliphi elinye idolobha, futhi linababukeli bemidlalo yaseshashalazini enkulu kunazo zonke Umhlaba.
Ngaphakathi kwedolobha laseWestminster eLondon, isifunda sokuzijabulisa seWest End sigxile ezizungeze iLeicester Square, lapho kubanjelwa khona iLondon kanye namafilimu omhlaba, kanye nePiccadilly Circus, ngezikhangiso zayo ezinkulu zikazwelonke. Isifunda semidlalo yeshashalazi saseLondon silapha, njengoba kunjalo ngamanema amaningi, imigoqo, amakilabhu nezindawo zokudlela, kubandakanya isifunda sedolobha laseChinatown (eShoho), futhi empumalanga kuneCovent Garden, indawo yezitolo ekhethekile yezindlu. Lo muzi uyikhaya lika-Andrew Lloyd Webber, omculo wakhe ubelawula i-West End theatre kusukela ngasekupheleni kwekhulu le-20th. IRoyal Ballet yase-United Kingdom, i-English National Ballet, iRoyal Opera ne-English National Opera zenzelwe eLondon futhi zisebenza eRoyal Opera House, eLondon Coliseum, eSadler's Wells Theatre naseRoyal Albert Hall kanye nasekuhambeleni izwe.
U-Islington's 1 mile (1.6 km) U-Upper Street, udlulela enyakatho usuka e-Angel, unemigoqo nezindawo zokudlela eziningi kunanoma imuphi umgwaqo wase-United Kingdom. Indawo ethengisa kakhulu yase-Europe i-Oxford Street, umgwaqo wokuthenga ocishe ube yi-1 miles (1.6 km), okwenza ube ngumgwaqo omude kakhulu wokuthenga e-UK. Isitaladi i-Oxford siyikhaya lesibalo esikhulu sabathengisi kanye nezitolo zeminyango, kubandakanya isitolo esidume ngobuningi be-Selfridges.
ISkyightsbridge, ekhaya lesitolo esidumile soMnyango weHarrods, iseningizimu nentshonalanga.
ILondon iyikhaya labakhiqizi iVivienne Westwood, Galliano, Stella McCartney noJimmy Choo, phakathi kwabanye; izikole zayo ezidumile zobuciko nemfashini ziyenza isikhungo semfashini yamazwe omhlaba eceleni kweParis, ikhayithi, Futhi New York City. ILondon inikela ngokuhlukahlukene okuhlukahlukene kokudla njengomphumela wabantu bayo abahlukahlukene ngokuziphatha. Izikhungo zezindawo zokudla zibandakanya izindawo zokudlela zamaBangladeshi zeBrick Lane kanye nezindawo zokudlela zaseChinatown.
Kunemicimbi eyahlukahlukene yonyaka, eqala nge-New Year's Day Parade entsha, isibukiso somlilo eLondon Eye; Iphathi yomgwaqo wesibili ngobukhulu emhlabeni, i-Notting Hill Carnival, ibanjelwa ngasekupheleni kuka-Agasti Bank Bank unyaka ngamunye. Izigaba zendabuko zifaka uMbukiso we Mayor weNkosi kaNovemba, umcimbi owathatha amakhulu eminyaka wokubungaza ukuqokwa kwaminyaka yonke kwe-Lord Mayor yeDolobha laseLondon nethimba lemigwaqo emigwaqweni yedolobha, kanye ne-Trooping the Colour, okusemthethweni okuvela ekhasini lezempi yamasosha weCommonwealth neBrithani ukugubha usuku lokuzalwa lukaNdlovukazi.
Umbiko we-2013 owenziwa yiCity of London Corporation uthe iLondon “idolobha eliluhlaza kakhulu” eYurophu enama-35,000 acres amapaki omphakathi, amahlathi nezivande. Amapaki amakhulu kunabo bonke abaphakathi nendawo yeLondon amathathu kukhona amaRoyal Parks ayisishiyagalombili, iHyde Park nomakhelwane wayo iKensington Gardens entshonalanga, neRegent's Park enyakatho. IHyde Park ikakhulukazi ithandwa kwezemidlalo futhi kwesinye isikhathi iba namakhonsathi evulekile. I-Regent's Park iqukethe iLondon Zoo, indawo yasosayensi endala kunazo zonke emhlabeni, futhi eduze neMadame Tussauds Wax Museum. IPrimrose Hill, ngokushesha enyakatho yeRegent's Park, e-78 m iyindawo ethandwa ukubuka indawo yesibhakabhaka yedolobha.